အရူး catz ...
မေးခွန်း အရူး catz ...
3 နှစ်ပေါင်း3days ago #203 by PAYSON
အခြားမည်သူမဆို re-ဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့် panel ကိုယာဉ်မောင်းများနှင့် plugins ကိုမှအခါအားလျော်စွာအဆိုပါရူးသွပ် catz / saitek သွားရောက်ရှိပါသလား ငါကအရာအရာရှိတစ်ဦးအလည်အပတ်အောက်ပါချောမွေ့အလုပ်လုပ် "ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ" ၏အမှုဖွင့်သော်လည်းရှာပါ။ ငါဖြစ်ကောင်းရုံ SPAD ရသင့်တယ်ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်း quirks ရှိပါတယ်နားထောင်ကြလော့။
3 နှစ်ပေါင်း3days ago #204 by Gh0stRider203
ငါ> ။ Saitek x45 ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအပေါ် busted ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးတဦးတည်း> ရှိသည်ဖို့သုံးစွဲခဲ့တဲ့ eBay ပေါ်မှာ x55 အပေါ်လေလံပေမယ် majorly outbid တယ်
3 နှစ်ပေါင်း3days ago #209 by kolijahc
သင့်ရဲ့ x45 မည်သို့ကိုချိုးဖျက်ခဲ့တာလဲ , ငါ့အိုးရုံစပ်စုထှကျသှားကွ၏။ ငါစမ်းထုတ်ယူပြီးနောက်ဒါဟာငါ့အကြိုက်ဆုံးရဟတ်ယာဉ်ချောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကမှော်မှုန်ရေမွှားသူတို့နှင့်အတူ restore ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကျွန်တော်ကြားလျှင်, ကိုယ်ကဝယ်ပေမယ့်ကြိုးစားရန်ရသေးရှိသည်။ ငါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင်, ငါအဖြစ်ကောင်းစွာ eBay trolling စတင်ခဲ့သည်။ တွေ့သည်ကအကောင်းဆုံး CH သင် $ 40USD နဲ့တူများအတွက် (fighterstick usb) ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကပ်နှင့် $ 60USD များအတွက်လိုလားသူခြေနင်း usb ။ ငါမလိုအပ်အားလုံးသည်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါ eBay ပေါ်တွင် x55 နှင့် x56 နှင့်အတူကောင်းသောကံရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းအလွန်အမင်းကြီးလွန်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရိပ်ရတဲ့စာရင်း (သာတုတ်နှင့်မအပေါငျးတို့သ circuitry သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်သည့်ရှိန်ကို) သို့မဟုတ် untested (သူတစ်ဦး usb port နဲ့ 30 စက္ကန့်ရှိသည်ပါဘူး?)
လူတွေအများအပြားကသူတို့ကိုမုန်းဖို့ကိုချစ်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီကိုအကောင်းဆုံးအပေးအယူတ thrustmaster HOTAS X ကို ($ 20USD) ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် HOTAS4($ 30USD) ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်သောအပြာတစ်ဦးကိုရှာပါ။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲအမြန် mods (က paracord လက်ကိုင်များအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲတွင်းတူးနှင့်ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်စံကိုက်ညှိပြီးနောက်နွေဦးဖြုတ်စေနွေဦးညှိနှိုင်းမှုဖုပတ်လည်အနားကွပ်ကိုပယ်ဖြတ်လ) ပြုပါနှင့်ရဟတ်ယာဉ်သင်ယူချင်သောငါ၏မိတ်ဆွေများကွာသူတို့ကိုပေးပါ။ သငျသညျအလွယ်တကူသူကပြောတယ်အရာသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ကအံ့သြစရာလက်ပ်တော့ချောင်းကိုစေသည်။
3 နှစ်ပေါင်း2days ago #215 by PAYSON
ငါက X-45 မရှိခဲ့ဘူးမင်္ဂလာပါ KC, ငါသည်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု crossover လုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါပိုင်ပါတယ်အားလုံး Saitek X-55 HOTAS ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအတန်ငယ် "တွဲ" ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ကိုယ့်တစ်ဦးချောင်းကိုနှင့်အချို့သောခလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါပြန်သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံပထမဆုံးစတင်စမ်းသပ်အကောင်အထည်လျှင်သင်လိုအပ်သမျှသောငါ၏ Logitech အဓိပတိ, ကိုသွားချင်ပါတယ်။ (ငါကဲ့သို့) အချို့ကိုသင်အလေးအနက် AI အဆန့်ကျင်မည်သည့်တိုက်ခိုက်ရေးပြုကြလျှင်, X-55 (သို့မဟုတ် 65) "ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က" ပူ HOTAS လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
3 နှစ်ပေါင်း2days ago #217 by Gh0stRider203
ပထမဦးဆုံးအချွတ်, အရမ်းရယ်ရတယ်အရမ်းရယ်ရတယ်ငါကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဟုတ်ခဲ့သေချာပါတယ်လယ်ပြင်ပတ်ပတ်လည်ဒီတော့အဘယ်သူမျှမသောက်သင့်ရဲ့ပုံတူ post ကိုဖယ်ရှား
ကိုယ့်အပေါငျးတို့သချောင်းကိုနှင့်အတူသှားသောအရာကိုငါမသိပေမယ့်ငါ MY ချိန်ခွင်လျှာဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါ့လက်ကချွတ်ရယူရန်, လက်ကိုင်ပေါ်ဆင်း လာ. အခါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု busted KNOW ။
သငျသညျငါ့ကိုမမေးလျှင်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာများအတွက် CRAPPY ဒီဇိုင်းကို ... ကိုယ့်တချို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတိပ်ခွေကိုအသုံးပြုပြီးယာယီပြုပြင်ရေးလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပေမယ့်ကောင်းစွာသင်သည်အစဉ်အမြဲဂုဏ်နနောက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးငါသိ၏။
သော်လည်းတုတ်မရှိပဲ, အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငါချောင်းကိုသုံးပြီးတယ်တစ်ခုမှာစက္ကငါ bug ကို squash ကကောက်လာမယ့် (ငါ့တိုက်ခန်းတွေအကြောင်းဆုံးကိုမုန်းသည့်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းသူကပြောတယ် roaches ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မြို့သူမြို့သားကိုခေါ်တော့ပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောင်းသောအရာမပြုသောအမှုဖွင့်နိုင်အောင်ငါထင် NEXT ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) ကိုကောင်တီကနျြးမာရေးကလဝကရန်ဖြစ်ပါသည်။ , ငါကိုပြန်ချထားနှင့်ကအလုပ်လုပ်ဖြတ်။ ကိုယ့် wtf နဲ့တူတယ်? တကယ်?
3 နှစ်ပေါင်း2days ago #218 by Gh0stRider203
PAYSON wrote: KC, ငါက X-45 မရှိခဲ့ဘူးမင်္ဂလာပါကျနော်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု crossover လုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါပိုင်ပါတယ်အားလုံး Saitek X-55 HOTAS ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအတန်ငယ် "တွဲ" ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ကိုယ့်တစ်ဦးချောင်းကိုနှင့်အချို့သောခလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါပြန်သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံပထမဆုံးစတင်စမ်းသပ်အကောင်အထည်လျှင်သင်လိုအပ်သမျှသောငါ၏ Logitech အဓိပတိ, ကိုသွားချင်ပါတယ်။ (ငါကဲ့သို့) အချို့ကိုသင်အလေးအနက် AI အဆန့်ကျင်မည်သည့်တိုက်ခိုက်ရေးပြုကြလျှင်, X-55 (သို့မဟုတ် 65) "ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က" ပူ HOTAS လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းရယ်ရတယ်ငါတော်တော်များများတိုင်းတစ်ခုတည်းခလုတ်ကိုများအတွက်အသုံးပြုမှုတယ် ... ya ငါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေအများကြီးမကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်ငါအများအားဖြင့်ဂျမ်ဘိုပျံသန်းပါစဉ်အဖြစ်ငါ 55 ပေါ်မှာရှိသမျှ function တွေကို LOVE
ငါကပို ILS ဤသည်နေ့ရက်ကာလ (အခုငါကချစ်ကြ ILS မုန်းဖို့အသုံးပြုအရမ်းရယ်ရတယ်) ချဉ်းကပ်ကြဘူးကတည်းကငါချဉ်းကပ်ဖို့ NAV1 ရန်နှင့် NAV ထံမှ GPS စနစ်ကနေအကူးအပြောင်းဖို့ autopilot များအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲ setup ကိုရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်ငါ 45 ATC စကားပြောခဲ့သောအခါငါတကယ်များအတွက်ကီးဘုတ်အသုံးပြုတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကိုစဉ်းစားသည် APU on / off ကိုဖွင့်ခြင်း, ဖြစ်နိုင် 1 သို့မဟုတ်2သေးငယ်တဲ့အမှုအရာ
3 နှစ်ပေါင်း2days ago #221 by PAYSON
အိုကေ ! ငါမှားဖိုရမ်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ အများစုကတောင်းပန် .gtg
0.217 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်